Akụkọ - Ọnụ ego na-arị elu na-akwado ọnụahịa rebar Europe
Ọnụ ego na-arị elu na-akwado ọnụ ahịa ahịa Europe
Ndị na-emepụta ihe na mba ndị dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ Yurop gosipụtara ụkpụrụ dị ala, ịrị elu ọnụahịa dịpụrụ adịpụ, na ọnwa a. Oriri na-eri ụlọ ọrụ na-ewu ihe na-adịgide adịgide. Ka o sina dị, a chọpụtara enweghị nnukwu azụmahịa ma nchegbu banyere Covid-19 na-aga n'ihu.
Mills ndị German guzobere ala ọnụahịa
Ndị na-emepụta okporo ụzọ German na-eguzobe ntọala ntọala maka € 200 kwa tonne. Mills na-akọ akụkọ dị mma, oge nnyefe ga-adịkwa n'etiti izu anọ na isii. Singzụta ihe dị ntakịrị ala, mana ọrụ kwesịrị iburu n'ọnwa ndị na-abịanụ. Ndị na-emepụta ụlọ na-ezute akụkụ uru uru dị ka ha ka na-ebuli ụkpụrụ ahịa ha.
A jụrụ ike nke ụlọ ndị Belgium
Na Belgium, ụkpụrụ ntọala na-abawanye n'ihi na-emefu scrap mmefu. Ndị na-azụ ahịa nwere ike ịnakwere ọganihu ndị ọzọ, iji nweta ihe. Agbanyeghị, ọtụtụ ndị nhazi ewepụtaghị ụdị ego ndochi nke ngwaahịa ha rụchara.
Ndị na-ahụ maka ngwa ahịa na-enwe echiche dịgasị iche gbasara ike ngalaba a na-ewu ụlọ. Managzụta ndị njikwa na-echegbu na ọchịchọ nwere ike ịda na ngwụcha afọ ma ọ bụrụ na ahapụghị ọrụ ọhụrụ.
Olileanya nke itinye ego gọọmentị na Italytali
Ndị na-eme mkpọgharị Italiantali nyere iwu iwetulata ọnụ ahịa na Septemba. Achọpụta ntakịrị ntakịrị na ngalaba ụlọ ụlọ. Olileanya dị na gọọmentị itinye ego ga-akwalite akụkụ ahụ, n'oge na-adịghị anya. Otú ọ dị, ndị na-azụ ahịa na-eji nlezianya azụ ihe. Nsogbu akụ na ụba na-adịgide n'etiti ntiwapụ nke Covid-19.
Ndị ahịa ịtali nke Italiantali nwere ike ibuli ụkpụrụ ahịa ha, n'ọnwa a, nke mba ụwa na-arị elu na-ejupụta. Ka o sina dị, mmemme ịzụ ihe maka ihe igwe ihe na-ejedebe.
Mill mmezi he Spanish mmepụta
Spanish rebar ndabere ụkpụrụ guzosie ike nke a ọnwa. Mmepụta belatara n'ihi mmemme mmezi igwe ihe, mana enwekwaghị azụmahịa buru ibu. Ndị na-azụ ahịa na-eche ịnata nkwuputa sitere na ụlọ ọrụ igwe ihe ochie Gallardo Balboa, nke dị na Getafe, nke ndị otu Cristian Lay nwetara n'oge na-adịbeghị anya.
Ọrụ na mpaghara ihe owuwu ahụ na-aga nke ọma. Ọnọdụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ fọdụrụ na-egbochi, n'ihi ọrụ ndị na-egbu oge na enweghị mkpebi n'etiti ọrịa ọrịa coronavirus.
Tct okirikiri Hụrụ Agụba N'ihi Metal, Tct okirikiri Hụrụ Agụba, Hss M35 okirikiri hụrụ pupụtara, Hss M2 okirikiri hụrụ pupụtara, Hot Work Ngwá Ọrụ Steel gbapụtara Ewepụghị Ogwe, Tct okirikiri hụrụ UM UBARA,